Turkiga oo duqeeyay saldhigyada Ciidmmada Syria | Berberanews.com
Home WARARKA Turkiga oo duqeeyay saldhigyada Ciidmmada Syria
Turkiga oo duqeeyay saldhigyada Ciidmmada Syria
Madaxweyne Tayyip Recep Erdogan ayaa sheegay in militariga Turkiga ay duqeeyeen 46 kamid ah saldhigyada ciidammada Suuriya si ay uga faleceliyaan weerarkii lagu qaaday ciidammadiisa.
Wuxuu sheegay in 30 ilaa 35 kamid ah ciidammada Suuriya ay weerar rogaal celis ah ku dileen.
“Turkigu si xooggan ayuu u aargoosan doonaa. Gooba cayiman ayaan madaafiic ku garaci doonaa. Kuwa raba inay Turkiga ku tijaabiyaan weeararrada fuleynimada ee noocan oo kale ah, waxay ka marag noqon doonaan inay khalad weyn sameeyeen oo cashir aysan hilmaami doonin ayaan u dhigi doonaa”, ayuu yiri Erdugan.
Erdogan wuxuu digniin u diray Ruushka oo ah in uusan faraha lasoo gelin sida dalkiisa uu uga falceliyay duqeynta, “Ma ahaan Ruushka inuu isku hor gudbo waddadeena”
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli Turkiga uu sheegay in afar kamid ah ciidammadiisa la dilay halka 9 kalena la dhaawacay kaddib markii ciidammada dowladda Suuriya ay duqeyn ka geysteen saldhig ay ku sugnaayeen ciidammada Turkiga oo ku yaal gobolka Idlib.
Turkiga ayaa horey ciidammo u geeyay gobolka Idlib ee dalka Suuriya si ay uga hortaggaan qalalaase halkaas ka dhaca.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayay aheyd markii madaxweyne Erdogan uu ku hanjabay in Turkiga uu jawaab militari ka bixin doono waa haddii ciidammadiisa ku sugan gobolka loo handdado.
Previous article” Maanta waxaan La Hadlayaa Taliye Dabagale iyo Gudoomiyaha Baanka Bal Hada Eega Hadhoow Bay Odhan Layma Heesin oo Laylama Hadline ” Cali Duulduul Oo afka Furtay Toloow Maantana Yuu Duqeeyey.
Next articleTurkiga oo jihooyin kala duwan laga soo weeraray